तपाईको छोराचाँहि पढ्ने, अनि गरीबका छोरालाई चाहिँ मर्न पठाउने ? – सुवेदी | Hakahaki
तपाईको छोराचाँहि पढ्ने, अनि गरीबका छोरालाई चाहिँ मर्न पठाउने ? – सुवेदी
९ चैत, काठमाडौं । ओखलढुंगा काण्डमा मसँगै बसेका बच्चाहरु राम-लक्ष्मण मारिइसकेपछि मैले पार्टीमा कुरा उठाएँ । म बनारसमा दुई दिनसम्म खानै नखाइकन बसें । त्यसपछि वीपीलाई गएर भनें- तपाईको छोराचाँहि पढ्ने, अनि गरीबका छोरालाई चाहिँ मर्न पठाउने ? गिरिजाबाबु किन जानुभएन ओखलढुंगा ? सुशील कोइराला त्यहाँ किन गएनन् ? किन पठाउनुभएन उनीहरुलाई ?
वीपीले त्यस्तो हुँदैन, बच्चाहरु पढ्छन्, पछि काम गर्छन्, ओखलढुंगाको लडाइँ असफल भयो, अनि तिमी यस्तो कुरा गर्छौ भन्नुभयो ।
उहाँको जवाफ मलाई चित्त बुझेन । मैले भनें- तपाईले आफ्ना सन्तानलाई चाहिँ बचाउने, भोलि यिनीहरुलाई शासक बनाउनुहुन्छ भन्ने थाहा छ मलाई । तपाईले राम-लक्षमणहरुलाई मराएर यस्तो घातक काम गर्नु भो, म तपाईको पार्टीमा बस्दिँन । त्यहाँ तपाईको कोही आफन्त मरेको भए म यो कुरा गर्ने थिइँन । तपाईको छोरो (शशांक) भोलि शासक हुन्छन् । शेखर त्यहीँ पढ्दैछन्, सुजाता कोलकातामा पढ्दैछिन् । यिनैले भोलि गएर हामीलाई शासन गर्छन् । यस्तो पार्टीमा म किन बस्छु ? मलाई चाहिएन यो पार्टी ।
त्यसपछि त त्यहाँ कुटाकुटै भयो नि । मलाई हाने । कुटे । मुख छाड्छौ ? भन्दै वीपी आफैंले मलाई हाने । मैले कितावमा लेखिदिएको छु । नेपालयले छाप्दैछ मेरो त्यो किताब ।
माओत्सेतुङकी श्रीमती मारिइन्, छोरो पनि मर्‍यो । वीपीचाँहि बनारसमा बसेर जनताका, गरीबका छोराछोरी मराउने ? फेरि त्यो ओखलढुंगा सेनासँग जित्ने ठाउँ थिएन । १५/२० जना मान्छेले सेनाको त्यत्रो ब्यारेकसँग लड्न सक्छ ? सेनासँग लड्ने तागत थियो उनीहरुसँग ? दाहालहरुलाई पठाएर त्यो नचाहिने काम के गरेको ?
शेरबहादुर चलाख छन् तर ‘जाँड पार्टी’ ले चिनिन्छ, शशांक जन्मँदैका जर्नेल, रामचन्द्रलाई मन्त्री भएपछि चिनियो । बिराटनगरका नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता दूर्गा सुवेदीसँगको कुराकानीमा आधारित समाचार अनलाइन खबरमा छापिएको छ ।